Gaa Leta Nkume nke Gibraltar | Akụkọ Njem
Gaa Leta Rock nke Gibraltar
Mariela Carril | | Gibraltar, Nduzi
The nwere mmasị n'echiche ahụ? Nkume a nke nkume Ọ dị n’aka ndị bekee ruo ogologo oge ma na-anabata ndị njem nleta si n'akụkụ ụwa niile. Nkume ahụ abụghị naanị ihe na-akpali akpali nke nkume monolithic nke e guzobere ogologo oge gara aga, ihe dị ka nde 200 nde, mgbe efere tectonic abụọ kụrụ. Nzukọ ahụ mekwara ọwa mmiri Mediterenian, wee bụrụ ọdọ mmiri nnu.
Taa otutu ala ya bu ihe okike ma obu ebe ezumike puru iche na mpaghara Europe a ọ na-agwakọta ọdịdị na akụkọ ihe mere eme na njem nleta ya.
2 Otu esi aga Gibraltar
3 Ihe ịga leta na Gibraltar
Nkume a na-ejikọta ya na ala Iberian peninshula site na ala aja aja nke a na-egbutu n'otu oge site na uzo. Ọ bụ nzu na ọ ruru ihe dị ka mita 426 nke elu. Kemgbe mmalite narị afọ nke iri na asatọ ọ dị n’aka Great Britain, okpueze ọ gafere ka a lụsịrị Agha Ndị Spen.
Anyị kwuru na mbido na Emebere ya mgbe nkukota nke efere tectonic abuo, Afrika na Eurasia. Mgbe ahụ ọdọ mmiri Mediterenian nke mekwara n’oge ahụ, n’oge oge Jurassic, kpọrọ nkụ ma naanị mgbe e mesịrị mmiri mmiri nke Oké Osimiri Atlantik jupụtara n’osimiri ahụ na-enweghị ihe ọ bụla, na-asọda site n’okporo mmiri iji nye Oké Osimiri Mediterenian nke anyị maara taa.
Nkume di na nkpagide, ma obu nkume ahu na-etolite peninshula nke na-apụ apụ emi odude ke usụk usụk esụk Spain. Echiche sitere na saịtị a bụ ihe dị egwu, karịa ma ọ bụrụ na mmadụ maara nkà mmụta ala ma mara akụkọ ihe mere eme nke nkume.
Ihe mejupụtara nkume ndị a gbakwunyere ifufe na mbuze mmiri nwere okwute ndi ozo, ihe dị ka otu narị, ọ dịghị ihe ọzọ na ihe na-erughị. Ọtụtụ n’ime ha bụkwa ebe ndị njem nleta.
Otu esi aga Gibraltar
I nwere ike ime ya jiri ụgbọ mmiri, ụgbọ elu, okporo ụzọ ma ọ bụ ụgbọ oloko. N'ezie, ụgbọ elu si England na-abịa mgbe niile. Ndi ugbo elu bu ndi British Airways, easyJet, Monarqch Airlines na Royal Air Maroc. Ọ bụrụ na ịnọ na Spain ị nwere ike ịbanye Jerez, Seville ma ọ bụ Malaga ma si ebe ahụ gawa n'okporo ụzọ ahụ ije nke na-akarịghị otu awa na ọkara.
Mpaghara ọdụ ụgbọ elu dị naanị nkeji ise site na ọdụ ụgbọ mmiri. Ikwu okwu banyere ọdụ ụgbọ mmiri i nwere ike iru n’elu nkume site na nrughari. E nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ: Saga Cruises, HAL, P&O, Granc Circle Cruise Line, Regent asaa Osimiri, dịka ọmụmaatụ. I nwekwara ike iji ụgbọ oloko si Spain, France na England. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịnọ na Madrid, ị ga-ewere Altaria, n'abalị, na-aga Algeciras. Gbọ oloko a nwere klaasị mbụ na klaasị nke abụọ.
Ozugbo ị banye Algeciras, ị ga-aba bọs n'ihu ọdụ ụgbọ oloko ahụ, nke na-ahapụ ọkara ọkara ọ bụla maka La Linea, nke bụ ókèala Spain na Gibraltar. Gbakọọ ọkara otu awa .. si n'ebe ahụ, n'ihi na ị gafere ịga ije. Dị mfe!
Banyere akwụkwọ, ọ bụrụ na ị bụ nwa amaala Europe ị chọrọ kaadị njirimara ma ọ bụrụ na ịnọghị, ị ga-enwerịrị ezigbo paspọtụ. Chee na ọ bụrụ na ịchọrọ visa iji banye United Kingdom, ị ga-achọ ya iji zọọ ụkwụ na Gibraltar.
Ihe ịga leta na Gibraltar
Eziokwu bụ na ọ bụ obere mpaghara na ị nwere ike mfe inyocha ya na ụkwụ, ma ọ dịkarịa ala obodo na Nkume. Site na ókè-ala ruo n’etiti ije bụ nkeji iri abụọ, dịka ọmụmaatụ, ọ bụ ezie na ị gara na Nature Reserve ọ nwere ike iwe obere oge. Maka ndị na-anọkarị otu ebe ị nwere ike iji tagzi ma ọ bụ eriri ụgbọ ala mgbe niile. Isgbọ tagzi nwere ike ịrụ ọrụ dị ka ihe nduzi njegharị na ọbụna nye njegharị nke ha.
Okporo ụzọ USB ahụ nọ na-arụ ọrụ kemgbe 1966 ma were gị gaa n'elu Nkume iji nwee ọmarịcha echiche. Stationlọ ọrụ ahụ dị na isi ahụ dị na Grand Parade, na nsọtụ ndịda obodo ahụ ma na-esote Ogige Botanical. Na nkume ụgbọ ala ọha na-agba ọsọ.
La Ebe nchekwa Nature Gibraltar Ọ dị na mpaghara elu nke Oké Nkume. See hụrụ Europe, Africa, Atlantic, Oké Osimiri Mediterenian. Cheta na ịdị elu dị mita 426. Si ebe a ị nwere ike ịga njem ma gaa na ụfọdụ ọgba ndị ama ama dịka Ọgba nke San Miguel, nke a na-ekwukarị na ọ dị ala nakwa na ọ na-ejikọta Europe. Eziokwu bu na o nwere otutu akuko dika onye n’agha, o bu ulo ogwu n’agha nke abuo, onu ulo ya di nma.
Katidral bụ otu n'ime ụlọ ndị a ma meghee ọha na eze dị ka ụlọ nzukọ maka egwu na ballet galas ebe ọ nwere ikike maka mmadụ 600. Ọzọ nke ọgba bụ Gornham Cave, a maara maka ịbụ otu n'ime ogige ikpeazụ nke Neanderthals. N'oge ahụ ọ dị naanị kilomita ise site n'ụsọ oké osimiri ma chọpụta na 1907. Ihe ịtụnanya dị oke ọnụ ahịa.
N'aka nke ozo enwere kwa Tunnels nke Siege, netwọ labyrinthine nke corridors malitere na ngwụsị narị afọ XNUMX ọ bụkwa akụkụ nke usoro nchekwa.
Nnukwu nnọchibido bụ nnọchibido nọmba 14 na Nkume, mbọ ọzọ ndị Spain na French nwetaghachiri ókèala ahụ. Ọ dị na Julaị 1779 ruo February 1783, afọ anọ na mkpokọta. Taa so na a na-emeghe ọhaneze na paseeji ndị a: 300 mita na mkpokọta na e nwere ụfọdụ oghere na-enye echiche dị ukwuu banyere Spain, ala ahụ dị warara, na mmiri. Ọ bụ ije site n'akụkọ ihe mere eme.
N'ikpeazụ, ọ bụghị naanị ndị Rom, Bekee ma ọ bụ Spanish na-agagharị ebe a. Ya mere, ndị Arab. Ma ha dị mkpirikpi mana afọ 701! Site n'oge ahụ, a na mgbidi a maara dị ka Orlọ ndị Moorish, site na narị afọ nke XNUMX. A na-eji Torre del Homenaje ochie ma ọ bụ brik ochie ma ọ ka dị ogologo, na-egbochi ịgafe ọtụtụ narị afọ. Mgbe ị gara ileta ya, ị ga-anụ ọtụtụ akụkọ ma ọ bụ na njedebe ya ka ndị bekee buliri ọkọlọtọ alaeze ahụ na 1704 ka ọ ghara iwetula ya ala ọzọ.
N'ikpeazụ, a na-atụ aro ije: a na-akpọ Nzọụkwụ nke Mediterranean. Ọ bụ 1400 mita na-agba ọsọ ezi tara akpụ na-ewe site na otu awa na ọkara ka abụọ na ọkara awa. Ọ ga-adị mma ibido n’isi ụtụtụ, ọ kachasị n’oge anwụ, ma ọ bụ mgbe anwụ na-achọ ịda maka ndo. N'oge opupu ihe ubi uzo juputara na okooko osisi ma obu mma.
Ọ na-aga site na Puerta de los Judíos, n'akụkụ ndịda nke Natural Reserve n'ihe dị ka mita 180 nke ịdị elu, na Batrị O'Hara na 419 mita nke elu na elu nke nkume ahụ.
The echiche bụ ihe kwesịrị ịnụ ụtọ na i nwere ike iji ohere ileta ụfọdụ ọgba ọzọ, otu mgbe ndị nwoke biri ndụ gara aga, wuo nke etiti narị afọ nke XNUMX, ọnụ ọnụ ugwu giddy, enwe na batrị ndị agha narị afọ. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na Gibraltar abụghị ebe ịnọ ụbọchị iri na ise, ị nwere ike iji ụbọchị abụọ ma ọ bụ atọ na-anụ ụtọ anyanwụ, echiche, ọdịdị na onyinye ya nke ụlọ oriri na ọ barsụ andụ.
Ulo? Nwere ike ihi ụra na họtel, ụlọ njem mgbazinye na obere ego, na ụlọ ntorobịa. Maka ozi ndị ọzọ egbula oge ị ga-aga na webụsaịtị gọọmentị nke njem Gibraltar, Nleta Gibraltar.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Gibraltar » Gaa Leta Rock nke Gibraltar